Ahoana ny fomba fitsitsiana bateria amin'ny telefaona Xiaomi miaraka amin'ny programmer mitsitsy hery | Androidsis
Ahoana ny fomba hitsitsiana bateria amin'ny telefaona Xiaomi miaraka amin'ny mpamonjy herinaratra
DaniPlay | | bateria, Tutorials, Xiaomi
Ny telefaona dia mazàna manala ny batterie-ny noho ny fisian'izy ireo indraindray misy rindran-damina maromaro ao ambadika mandany hery. Ilay mpanamboatra fanta-daza Xiaomi nanapa-kevitra taloha kelin'izay ampidiro fitaovana ao amin'ny MIUI Amin'izay ahazoana tahiry tena lehibe, noho izany dia safidy mety ho tratran'izay rehetra manana telefaona an'ity marika ity.
Zava-dehibe izany raha tsy ampiasainao mandritra ny ora maromaro, noho izany dia ampirisihinay hanao izany raha tianao ny bateria finday avoakan'ny finday avo lenta dia mila mandritra ny andro fiasana iray manontolo. Ny fahatongavana any dia asa sarotra satria tsy dia hita loatra izany ary mila manaraka dingana vitsivitsy ianao hanatanterahana izany.
1 Ahoana ny fomba fandaharana fitehirizana angovo
2 Dingana tokony horaisina
Ahoana ny fomba fandaharana fitehirizana angovo
Tsy ny rehetra no mampiditra an'io safidy io, noho izany dia tokony ho raisina raha te hanana telefaona tsy ho ela ianao, satria MIUI an'i Xiaomi dia mihoatra ny sosona Android mahazatra ihany. Mety miovaova ireo kinova MIUI hafa, satria tamin'ity indray mitoraka ity dia notsapainay tamin'ny Xiaomi Mi 9, telefaona natomboka tamin'ny taona 2019.
Ao amin'ny MIUI dia azonao atao ny manitsy azy amin'ny tanana, na dia ny rafitra aza dia mazàna mitantana tsara ny bateria ary tsy mahatsikaritra ny fandaniana amin'ny mAh. Xiaomi rehefa mandeha ny fotoana dia naniry ny findainy ho ara-toekarena ary fampisehoana azo ekena tokoa.
manome ho Famaritana ny telefaona Xiaomi anao ary mankanesa any amin'ny safidin'ny bateria, amin'ity tranga ity dia miseho «Bateria sy fampisehoana«. Tsindrio ny kodiarana ambony miorina amin'ny ilany ankavanana ary tadiavo ny safidy "Energy Saving".
Rehefa tafiditra ao anatin'ny fitehirizana angovo ianao, ampandehano ilay safidy "Mametraha fotoana hanovana fomba" ary amin'ity tranga ity dia fidio ny fiandohana sy ny fiafaran'ity fampahavitrihana ity. Raha vantany vao vita io dingana io dia ho soloin'i MIUI izy ary hitondra ny tahiry amin'ny fotoana rehetra.
Ny mahatsara an'io dia ny ahafahanao misafidy elanelam-potoana ahafahanao mampiasa ilay fitaovana, raha iray amin'ireo izay mampiasa azy io matetika ianao dia mety hahasoa amin'ny fotoana sasany. Miasa amin'ny terminal Xiaomi ihany izy io, saingy misy ny fampiharana ivelany izay manao dingana mitovy amin'izany ary hiresaka momba izany isika afaka andro vitsivitsy.
Ity fametrahana tahiry bateria ity dia azo ampiasaina im-betsaka araka izay itiavanao azy, mamela ny antso an-tariby hiditra, satria tsy hisy fiantraikany amin'ny maody izany amin'ny fiheverana ny antso rehetra ho zava-dehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Ahoana ny fomba hitsitsiana bateria amin'ny telefaona Xiaomi miaraka amin'ny mpamonjy herinaratra
PROGRAMA IZAHO ARY TSY MIVERINA IZAO RAHA VONDRANO NY PROGRAMY NANGATAKA IZAY HANome AZY MINIMUMA bebe kokoa dia apetrako ho fahasamihafana 1 na 2 minitra
Ny Galaxy Tab S7 sy Tab S7 Plus dia eo akaiky eo ihany: inona no fantatsika hatreto?